PPM: पूर्ण-सुविधायुक्त परियोजना प्रबंधन सास | Martech Zone
आइतवार, मार्च १,, २०१। शनिबार, अक्टोबर 25, 2014 Douglas Karr
एउटा आउटसोर्स वा अपतटीय विकास टोलीको साथ चुनौतीहरू मध्ये एक केवल तपाईंको कार्य ट्र्याक र प्राथमिकतामा खोज्नु हो। म तीन भन्दा कम आउटसोर्स संसाधनहरूसँग काम गर्दछु, तीमध्ये एक अपतटीय। यस्तो देखिन्छ जब तपाईं कार्यक्षेत्रलाई समय क्षेत्रहरू बीच विभाजित गर्नुहुन्छ, तपाईं स्वाभाविक रूपमा तपाईंको प्रत्येक चीजमा ढिलाइ गर्नुहुन्छ।
मैले केहि प्रेस गरे जब म बेसक्याम्प रद्द गरियो एक वर्ष पहिले। विडम्बना यो हो कि जब मैले मेरो नयाँ काममा हस्ताक्षर गरेको थिएँ, म फेरि बेसक्याम्पमा काम गर्दै थिएँ। म बेसक्याम्पमा दस्तक दिइरहेको छैन, यो योग्य अनुप्रयोग हो। मलाई बढि कडा काम र समय व्यवस्थापनको साथ केही चीज चाहिन्छ। मैले त्यसो गरें, र मैले अहिले पनि गर्दैछु। एक सरल बोर्ड गर्नको लागि छलफल बोर्डले यसलाई प्रोजेक्ट प्रबन्धन अनुप्रयोगको रूपमा काट्दैन।
मलाई थाहा छैन यदि सेर्गेई पोडबेरेशी र ग्रेग रोय (संस्थापकहरू) PPM परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयर) कहिल्यै बेसक्याम्प प्रयोग गर्‍यो, तर उनीहरूले निश्चित रूपमै केहि समस्याहरू अनुभव गरे जुन मैले आज आफैंको कम्पनीमा भेटें, QG सफ्टवेयर.
त्यसो भए - तिनीहरूले आफ्नो टाउको एकसाथ राखे र विकास गरे 5PM। एप्लिकेशनलाई विडंबनाका साथ, दुई फरक महाद्वीपमा विकास गरिएको थियो the बिभिन्न भाषाहरूमा (अब) छ कर्मचारीहरूले बोलेका।
PPM को पूर्वावलोकन देखे पछि, मैले सेर्गेईलाई सम्पर्क गरें। यहाँ छ कसरी 5PM बारेमा आए:
यो प्राय: परियोजना व्यवस्थापन समाधानको रूपमा विकसित गरिएको थियो - आवश्यकताको अभावमा। यो २०० 2003 मा फिर्ता भएको थियो जब हामी सुरु गरेका थियौं र यो हामीले मनपर्ने कुरा बाहिर केहि थिएन। त्यसैले हामी आफैले सुरू गर्यौं र यसलाई प्रोजेक्ट र टीम प्रबन्धक भन्यौं। वास्तवमा, त्यो पहिलो संस्करण शुरुमा म द्वारा विकसित गरिएको थियो, त्यसपछि हामी यसलाई विस्तार गर्न थप कोडरहरू भाडामा लिएँ। Pm बेलुका त्यो प्रारम्भिक उत्पादनबाट बढेको हो। यो सबै वेब २० हो, तर तपाईले देख्न सक्नुहुने यो धेरै पुरानो विचारहरूमा आधारित छ। वास्तवमा5बेलुका कुल डिजाइन थियो। सबै परिवर्तन भयो - विकास प्लेटफर्म र ईन्टरफेस बाट ब्रान्डिंग। हामीले नोभेम्बर २०० in मा शुरू गर्यौं SaaS (अघिल्लो संस्करण डाउनलोड गर्न योग्य थियो)।
मलाई लाग्छ कि यसलाई हेर्दा यो कस्तो भिन्न छ भनेर हेर्छ। इन्टरफेस डिजाइन गर्दा हामीले कुनाहरू काट्यौंैनौं। हामी एक क्लिक वा दुई भित्र सबै कुरा चाहान्छौं र सम्भावना इन्टरफेस अनुकूलित गर्न को लागी। यो एक फ्ल्यास समयरेखाको साथ आउँदछ (मलाई कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजर सफ्टवेयरको बारेमा थाहा छैन जुन AJAX र फ्ल्यास सँगै मिल्दछ)।
हामीसँग इन्टरफेस र सुविधाहरूमा अलिक फरक दृष्टिकोण छ - हामी सतहमा यसलाई सरल बनाउन कोसिस गर्छौं धेरै शक्ति "हुड मुनि" प्याकिंग गर्दा। साथै, pm बेलुका दर्शनहरूको एक रमाईलो मिश्रणको परिणाम हो - ग्रेग १ is बर्षको अनुभवको साथ आईटी प्रबन्धक हो, जबकि म जवान वेब डिजाइनर र विकासकर्ता हुँ। प्रबन्धकहरू विस्तृत दृश्यहरू र रिपोर्टहरू मन पराउँछन्। विकासकर्ताहरूले परियोजना व्यवस्थापन उपकरणहरू मूल रूपमा घृणा गर्छन्। यसैले हामीले एउटा इन्टरफेस डिजाईन गर्न कोशिस ग where्यौं जहाँ समुहका सदस्यहरूले सन्देशहरू थप्न वा एकल क्लिकले कार्य बन्द गर्न सजिलो हुन्छ (ईमेल मार्फत पनि), जबकि प्रबन्धकहरूसँग गहिरो खन्न सक्ने क्षमता छ।
म यो पनि सोच्छु कि हामी ग्राहकहरु बाट सुझावहरु को उपयोग गरेर, हामी सुविधाहरू थप्दा अधिक भिन्नता ल्याउँछौं। अर्को महिनाहरूमा हाम्रो टाइमलाइन र रिपोर्ट सेक्सनमा ठूला परिवर्तनहरू अपेक्षा गर्नुहोस्।
मैले हाम्रा विकास साझेदारहरूलाई PPM तुरून्त समीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छु। टोलीले एक झलक लिइरहेको थियो Jira, तर ईन्टरफेस ईमानदारीसाथ हेकलाई मबाट अलग गरिरहेको छ। म आशा गर्दैछु कि 5PM को प्रयोग गरेर मैले शट प्राप्त गरें!
तपाइँको लागि Office स्पेस यहाँ बाहिर छन, तपाइँ डेमो लाई पनि सराहना गर्नुहुन्छ। पर्याप्त भने।
टैग: 5pmयोजना व्यवस्थापनसाससाधारण परियोजना व्यवस्थापनसमाधानको रूपमा सफ्टवेयर
स्टारबक्स सोशल नेटवर्क सुरू गर्दै
मार्स 24, 2008 मा 1: 28 एएम
मलाई धेरै नै स्लिम र सहज अन्तर्वार्ता मन पर्छ। म अब यो प्रयास गर्दैछु (१ day दिन नि: शुल्क परीक्षण)। हेरौं!
मार्स 24, 2008 मा 2: 27 एएम
मैले भर्खर तपाईंको पोष्ट पढें र तपाईं राम्रो प्रोजेक्ट ब्यबश्थापन उपकरण खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दै म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु कि अवलोकन गर्नुहोस् ProjectOffice.net। यो हामीमा आधारित बेलुका समाधान हो जसले वास्तवमै राम्रो व्यवस्था गरिएको समय र खर्च व्यवस्थापन, विकिस र मुद्दा ट्र्याकि। पनि प्रदान गर्दछ।
मलाई विश्वास छ तपाईं यो मनपराउनुहुनेछ।
त्यसो भए यो प्रयास गर्नुहोस् र मलाई तपाईको अनुभव बताउनुहोस्।
मार्स 24, 2008 मा 9: 49 एएम
के, इन्डियानाका 5PM केटाहरू हुन्?!? 😉
ठट्टा गरेको। मैले भर्खरै PPM जाँच गरें र सतहमा, यो एकदम राम्रो देखिन्छ!
मार्स 24, 2008 मा 10: 00 एएम
हा! होईन - तर तिनीहरू नजिक छन् ... ओहायोमा;)।
अनुप्रयोगमा एक नजर पछि म राम्रो पंप थियो र यस बारे मा लेख्न चाहान्छु। विशेष गरी किनकि मैले यो कहिँ पनि अनलाईनको बारेमा लेखिएको देखेको छैन। अन्य ब्लगहरूको खोजीले कुनै परिणाम ल्याएन र सर्गेईले ईमेल मार्फत 'भर्चुअल अन्तर्वार्ता' गरे।
समय पनि राम्रो थियो - किनकि हामी अहिले मेरो काममा यी व्यवस्थापन मुद्दाहरूसँग संघर्ष गरिरहेका छौं।